September 26, 2020 - Amawpyay
ယောက်ျားလေးတွေ လက်မလွှတ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ ယောင်္ကျားလေးတွေ လက်မလွှတ် နိုင်သော မိန်းကလေး ဆိုတာ လောကကြီးမှာ ရှိပါတယ်။ ဒီစာလေးကို ယောင်္ကျားလေးတွေရော၊ မိန်းကလေးတွေ ကိုရော ဖတ်စေချင် ပါတယ်။ (1) ဉာဏ်ထက်ပြီး သူနဲ့နေရင် ဉာဏ်ရည် တက်လာ တယ်လို့ ခံစား ရတယ်။ ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဆိုတာ စိတ်ဝင်စား စရာကောင်း ပါတယ်။ ကိုယ့်ထက်ဉာဏ်ကောင်းလို့ မနာလို မဖြစ် ပါနဲ့။ လူတစ်ယောက် နဲ့တစ်ယောက်ဟာ အားသာချက်တွေ တူညီမှု မရှိပါ။ ကိုယ့်ကို တိုးတက်စေမဲ့ သူက ဘေးနားမှာ ရှိတယ် ဆိုတာ ဝမ်းသာစရာပါ။ (2) ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက် ဆိုတာ …
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အကြောင်း….
အပေါင်းအသင်းမက်ပေမယ့် ချစ်သူကို အရမ်းချစ်တတ်တဲ့ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အကြောင်း…. ချစ်​သူအ​ပေါ် အနိုင်​ယူ လိုတဲ့ စိတ် ​ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ့်ရဲ့ အလိုကျ အတိုင်း ဖြစ်​​စေချင်​တဲ့သူမျိုး။ အရမ်းလည်း ချစ်​တတ် ​ကြတယ် …။ တနင်္ဂ​နွေ​ သားသမီး​တွေက အရမ်းကြီး မထူးဆန်း​ပေမယ့် အခြားလူတွေနဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စရိုက်​​တွေကို ပိုင်​ဆိုင်​ထား သူ​တွေပါ။ ဒါ​ကြောင့် သူတို့ဟာ အခြားလူ​တွေနဲ့ ကွဲပြား​နေတတ် ကြပါတယ် …။ တနင်္ဂ​နွေ သားသမီး​တွေဟာ စာဖတ် ​ဝါသနာ ပါကြတယ်။ ဗဟုသုတကို လိုက်​စားတယ်။ အအိပ်​မက်တယ်​။ အစားမကြီးဘူး။ ဒါ​ပေမဲ့ ခဏ ခဏ စား​နေတတ်​ တာမျိုး၊ ​ဒေါသကြီး​ပေမဲ့ ​ကောက်​ရိုးမီး …
ချီးမွမ်းလည်း စိတ်မဆိုးနဲ့၊ ကဲ့ရဲ့လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့
ချီးမွမ်းလည်း စိတ်မဆိုးနဲ့၊ ကဲ့ရဲ့လည်းစိတ်မဆိုးနဲ့ ချီးမွမ်းခံရတာ၊ ကဲ့ရဲ့ခံရတာ(နိန္ဒာနဲ့ ပသံသာ) နောက်တစ်ခုက ဘာလိုိ့တုန်း ဆိုရင် -“နိန္ဒာ၊ပသံသာ´´ ချီးမွမ်းခံ ရတာနဲ့ ကဲ့ရဲ့ခံ ရတာတဲ့။ လောက လူတွေက ချီးမွမ်းခံ ရပြီ ဆိုလို့ ရှိရင်ကျေနပ်ကြ တယ်။ ကဲ့ရဲ့ခံရပြီဆိုလို့ ရှိရင်မခံနိုင် ကြပြန်ဘူး စိတ်က လှုပ်ရှားမှုက ဒီလိုဖြစ် လာတယ် ဗြဟ္မဇာလ သုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားက ချီးမွမ်းမှု၊ကဲ့ရဲ့ခံရမှုနဲ့ပ တ်သက်ပြီး တော့လိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက် ကလေးတွေပေး ထားတာ ရှိတယ်။ ဘုရားတရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးရဲ့ အပြစ်ကိုပြောပြီးနောက် ကလိုက် လာတဲ့`သုပ္ပိယ´ဆိုတဲ့ပရိဗိုဇ်ကြီး တစ်ယောက်၊ ဘုရားအတင်းပြော တယ်၊ တရားအတင်းပြောတယ်၊ သံဃာ အတင်းပြောတယ်၊ မကောင်းကြောင်းတွေ ပြောတယ်။ …
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ဘ၀ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လက်ခံထားရမယ့် အချက်များ
ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ဘ၀ကို ကြံ့ကြံ့ခံ ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ လက်ခံထားရမယ့် အချက်များ ဘဝဆိုတာ အမြဲ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အရာလို့ ပြောကြ ပါတယ်။ လူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ ခံစားမှုတွေနဲ့အတူ ဘဝမှာ ဖြစ် တတ်တဲ့ အခြေအနေ အားလုံးကို ရင်ဆိုင်နေကြရတာကြောင့် ဘဝက စိန်ခေါ်မှုတွေ ပြည့်နေတာပါ။ ဒီလိုမျိုး ဘဝကို အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ဘက် ကနေလည်း အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်ပြီး လက်သင့် ခံထား ရမယ့် အရာတွေ ရှိနေ ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ (၁) အကောင်းဆုံး ရင်ဆိုင်ဖို့ လိုတယ် ဘဝမှာ အကောင်းဆုံး နေနိုင်ချင်ရင် ကိုယ့်ဘက်ကနေ ဘာပဲလုပ်လုပ် …
အင်မတန် ဖူးရခဲတဲ့ ငါးမျက်နှာဘုရား တည်ရှိရာ နေရာ။ ခေတ်သစ် ဒီဇိုင်းများနှင့် ထူးခြားသော ဗိသုကာလက်ရာ များဖြင့် တည်ထားသောတောင်ထိပ်‌ပေါ် ဘုရားကျောင်းဆောင်လေးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ သာမန်ထက် ပိုပြီး တရားအားထုတ် ဖို့အတွက် နေရာလေး တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဘက် Tambon Khaem Son ဒေသ အလယ်ပိုင်းတွင် ရှိသော Wat Pha Sorn Kaewဗိမာန် သည်ဘုန်းတော်ကြီးများ နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားအားထုတ်သူ များ အတွက်ဓမ္မ ဆိတ်ငြိမ်ရာနေရာ တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဟောပြောရန် အတွက် ခန်းမ ၊ စေတီ နှင့် ပန်းဥယျာဉ်များ ပတ်ပတ်လည် ရှိသော တောင်ထိပ် …